Panel Solar Abavelisi, iPhaneli Solar Kits Suppliers, Mono Solar Panel - Haiti
Ukuzibophelela yethu Real Ifikelela Beyond Diesel & ipetroli injini
Ningbo waseHaiti eneji ehlaziyekayo owasekwa ngo-2001, yenye umenzi phambili solar photo-voltaic kunye series elanga lwemveliso umnqongo ngokunxulumene e China. WaseHaiti abakule R & D kunye nokuveliswa crystalline lesilicon iiseli elanga kunye neemodyuli. ninzi-electronic iiphaneli zesola, anesibambiso uluhlu ka-5 ukuya 300 W panel, iiphaneli zesola iMono-crystalline nganye kwakhona kuluhlu 160-190W / 260-280W panel nganye. Kunye neemveliso zethu, kananjalo kuza CE, iziqinisekiso ul, TUV. Ngapha koko, nathi lungayilwa uwusondeze isisombululo inkqubo gqith umoya-solar kuwe ukuba imfuneko kwezinye site ekhethekileyo ...
umoya Residential ephendulwa SWT5kw
Iimodyuli Small CHNSW-215W-225-235-M
High-kakuhle Iimodyuli CHNSW-290W-300W-60
Kabini-glass EzisembindiniName CHNSW-320W-330W-72
Kabini-glass EzisembindiniName CHNSW-310W-320W-72
Yesiqhelo EzisembindiniName CHNSW-220W-250W-60
Solar PV System ukuhlala
inkqubo PV elanga kuquka amacandelo ahlukeneyo kufuneka ukuba zikhethwe ngokungqinelana udidi kwindlela, indawo yakho site kunye izicelo. Awona macandelo enkulu kwinkqubo PV elanga isilawuli elanga isigxina, inverter, ibhanki ibhetri, imithombo yamandla abangabancedani kunye imithwalo (izixhobo).
inkqubo amandla elanga Industrial nezoshishino
inkqubo amandla elanga-mveliso kunye nezorhwebo ibandakanya solar panel, omnye umlawuli inkqubo kunye inverter. panel Solar uya kuvelisa DC (Direct yangoku) umbane, yaye oku umbane iya kuqhutywa nangona Converter kanye inverter ukuvelisa AC (alternating current) nombane. Emva koko lo amandla iqhutywa kwiqela amandla AC emva iinkampani nkampani igridi. Njengoko on-igridi kwinkqubo amandla elanga unandipha iingenelo ibhetri-free kunye nendleko eziphantsi ...
ngumoya inkqubo ezisebenzisa elanga for ekhaya
Ngokutsho iingcali eneji ehlaziyekayo ezininzi, i "hybrid" inkqubo yombane encinane oluhlanganisa umoya kwaye (photovoltaic) ubugcisa elanga inikeza okumbalwa phezu mhlawumbi system.In olunye kakhulu iindawo, ngezantya umoya ziphantsi ehlotyeni xa ilanga likhanya ankrelekrele elide. Umoya onamandla ebusika xa kwelanga ngaphantsi iyafumaneka. Ngenxa kwincopho amaxesha zisebenza kangangeminyaka umoya
INKQUBO Poland Plant 40KW PV
INKQUBO China Shanghai Ekhaya PV
Ireland umoya KWENKQUBO yorhwebo gqith elanga
Bolivia umoya KWENKQUBO yorhwebo gqith elanga